Alatsinainy Martsa 8, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Matt Chandler
Tadidiko foana ny mpampianatra toekarena any an-tsekoly, Andriamatoa Dilk. Ankoatry ny fanivanany tena mahatsikaiky rehefa hita fa te-hanozona izy (? Eny… BUGS !?) ny fampiasany cliches miverimberina dia nahatonga ny fahendrena sasany hiditra ao amin'ny ati-dohako izay nanjary hormonina. Anisan'ireo tiany:
Raha tsy mikasa ny hanao drafitra ianao dia mikasa ny tsy hahomby.
Ankehitriny, talohan'ny namoronana ireo afisy mandrisika mahatsiravina miaraka amin'ny sarin'ny rambony sy ny olona mananika tendrombohitra hitanao isaky ny biraon'ny orinasa. Ny foto-kevitry ny torohevitra hendry dia ny faritry ny ray aman-dreninao, mpampianatra anao ary ny PBS. Na eo aza ny toetra voajanahary amin'ny torohevitra toy izany dia nifikitra tamiko io.
Amin'izao fiainako matihanina izao dia mila ampahany betsaka amin'ny androko ny drafitra, ary misy antony marim-pototra. Rehefa manangona atiny iray ary Tetikasan'ny media sosialy, ny lahasa tokana manan-danja indrindra dia ny fametrahana izay sehatra sy serivisy ilaina indrindra amin'ny filanao ary manomana ny fomba fiasa mifanaraka amin'izany.
Tsy ny fanarahana ny fomba mahaliana irery ihany no mampihena ny toetran'ny marika, fa mandany vola ihany koa. Raha tsy misy ny kaonty marina momba izay efa natao tany – sy ny fotoana laninao hanaovana azy –y fandanianao vola amin'ny Internet dia fandaniam-potoana sy vola tanteraka.
Izay fivarotana nomerika mendrika ny sira dia hametraka anao ny laminasa. Raha tsy izany dia anontanio azy ireo izany. Raha tsy manana izy ireo na tsia, dia mandosira mandositra. Ho hitanao fa mihena ny tetibolanao amin'ny varotra an-tserasera ary tsy mila aseho an'izany afa-tsy ny fanamarinana nofoanana.
Mba hahatratrarana izany, raha toa ka afaka mametraka azy irery amin'ny sehatra dizitaly ny orinasanao dia mamporisika anao aho hijery ny Torolàlana CMO ho an'ny Landscape Social. Izy io amin'ny ankapobeny dia takelaka hosoka amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny tombontsoa sy lesoka amin'ny sehatra ambony sy serivisy. Ny fanadihadiana dia notanterahin'i 97th Floor, ary mpitari-dàlana iray-taratasy iray lehibe.
Betsaka ny tolotra tambajotra sosialy any; tsy misy tokana no marina, toy ny fiezahana hampiasa azy rehetra tsy mahomby. Tsy misy valiny tokana, tsy misy fomba fiasa atiny media sosialy tokana mety amin'ny mpanjifa tsirairay. Amin'ny alàlan'ny fanaovana drafitra mandanjalanja sy mahomby dia ampiasainao tsara ny fotoanao sy ny volanao.
Tags: cmohaino aman-jery sosialytontolon'ny media sosialydrafitra media sosialy
Mar 8, 2010 ao amin'ny 4: PM PM
Vao manomboka amin'ny media sosialy sy mianatra zavatra betsaka isan'andro. Mbola mamaritra ny fifantohako rehefa mandroso. Tranokala mahafinaritra eto! Manantena ny hamaky bebe kokoa.
Mar 9, 2010 ao amin'ny 1: PM PM
Raha miresaka ilay andian-teny hoe "Raha tsy mikasa ny hanao drafitra ianao dia mikasa ny tsy hahomby" hoy aho fa tena marina izany. Ny fampielezana haino aman-jery sosialy asa rehetra dia tsy maintsy misy dikany, tanjona ary tanjona farany. Ny fampiasana ny tambajotra sosialy dia nitombo isaky ny an'arivony ny fahafahan'ny orinasa kely hamorona fahatsiarovan-tena amin'ny marika, hanatsara ny serivisy ho an'ny mpanjifa, hampitombo ny varotra ary hanangana fifandraisana. Inona no lakileny rehefa avy namorona ny drafitrao ianao? Mba ho tonga eo, amboary ny fiarahamonina misy anao ary karakarao!
Manoro ity valiny manaraka ity aho http://bit.ly/aqAGbe ao amin'ny Startups.com, izay ilazan'i Maria Sipka drafitra amin'ny antsipiriany hananganana ny vondrom-piarahamoninao amin'ny Internet.
BTW, azonao atao ny mametraka ny Q&A mifandraika amin'ny orinasanao 😉
Mar 10, 2010 amin'ny 10: 10 AM
Lisitra tsara izany, Pete. Misaotra tamin'ny famakiana sy ny fandraisana anjara.
Betsaka ny olona tsy afaka miresaka akory ny dingana voalohany (eritrereto izay tianao hahatratrarana) hany ka lasa tsy misy dikany ny tohin'ny fizotrany. Raha tsy misy tanjona kendrena sy tanjona mazava ampiharina amin'ny metrika, dia mitifitra aloha ianao ary mametraka fanontaniana avy eo.